घर स्टेजिंग - पत्ता लगाउने प्रविधिहरु कि मूर्ख छन्! | सजाउनुहोस्
के तपाइँ घर स्टेजिंग जान्नुहुन्छ? यसलाई प्राप्त गर्न अचम्मको प्रविधि
सुसाना Godoy | 22/09/2021 10:57 | सजाउनुहोस्
पक्कै तपाइँ तथाकथित 'होम स्टेजिंग' को बारे मा सुन्नुभएको छ किनकि हरेक पटक यो अधिक बूम भएको छ र यो विशेष ध्यान दिन को लागी आवश्यक छ। यदि तपाइँ बिक्री को लागी तपाइँको घर लाई राख्ने बारे मा सोच्दै हुनुहुन्छ, तब तपाइँ अचम्मलाग्दो प्रविधिहरु के हो भनेर सिक्नु पर्छ ताकि प्रक्रिया धेरै छिटो तपाइँ कल्पना भन्दा धेरै गरीन्छ र हामी उत्तरहरु को सबै भन्दा राम्रो छ।
किनभने त्यहाँ धेरै मानिसहरु छन् जो विश्वास गर्छन् कि एक बिक्री महिना र महिना लाग्न सक्छ। यो सत्य हो कि यो धेरै कारकहरु मा निर्भर गर्दछ तर जब त्यहाँ सही उपकरणहरु छन् र तपाइँ उनीहरुलाई चाहानुहुन्छ, तपाइँ पक्कै ती सबै संग भावी खरीदारहरुलाई मोहित पार्नुहुनेछ। के तपाइँ सही कदम चाल्न इच्छुक हुनुहुन्छ?
1 'होम स्टेजिंग' को अर्थ के हो?
2 कसरी 'घर स्टेजिंग' गर्ने
3 किन यो प्रविधि एक राम्रो विचार बन्यो
'होम स्टेजिंग' को अर्थ के हो?
प्रविधि आफैं संग शुरू गर्नु भन्दा पहिले, हामी बोल्नु पर्छ वा राम्रो संग परिभाषित गर्नु पर्छ कि हामी 'होम स्टेजिंग' द्वारा के बुझ्छौं। साथै, यो फिक्सिंग वा कंडीशनिंग को क्रम मा यसको बिक्री छिटो बनाउन को लागी हो। तर हो, सबै भन्दा राम्रो मूल्य मा। त्यसोभए, यस्तो लाग्छ कि यस प्रकारको प्रक्रियामा दुबै पार्टीहरु जित्छन्। के यो प्रक्रिया को धेरै हिस्सा छैन सजावट आफैं हो, किनकि हामी राम्रो संग जान्दछौं कि यो सधैं केहि व्यक्तिगत हो, किनकि हामी सबै एकै चीज मन पर्दैन। यसको अतिरिक्त, यो कदम सधैं राम्रो छ एक यो दिन को लागी पेशेवर डेकोरेटर, जो हामीलाई सल्लाह दिन सक्छौं हामी के देखीरहेका छौं।
प्रविधि आफैं संयुक्त राज्य अमेरिका बाट आउँछ र महान परिणाम संग युरोप मा फैलिएको छ। प्रत्येक प्रविधि वा 'घर स्टेजिंग' को चरण हासिल गर्न जाँदैछ? शक्तिहरु हाइलाइट गर्नुहोस् जुन घर आफैंमा छ, पृष्ठभूमिमा कमजोर भएकाहरुलाई छोड्न। त्यसोभए, हामी एक अधिक तटस्थ तर सधैं आरामदायक र स्वागत गर्ने ठाउँ मा शर्त गर्न जाँदैछौं कि हामी घर कल गर्न सक्दछौं जतिसक्दो चाँडो हामी यसलाई हाम्रो आँखाको अगाडि देख्छौं।
कसरी 'घर स्टेजिंग' गर्ने
अब जब हामी जान्दछौं कि यो के हो र यसले हामीलाई के योगदान गर्न सक्छ, आउनुहोस् हामी कसरी यसलाई बाहिर लैजान सक्छौं। यो आफै मा एक साधारण कार्य हो, तर जसलाई हामी समय समर्पित गर्नेछौं:
सम्पत्ती सफाई आधारभूत बिन्दुहरु मध्ये एक हो। तर यो भन्दै बिना जान्छ, किनकि जब हामी एक फ्लैट वा घर हेर्न जान्छौं, यो पहिलो चीज हो जुन हामी हेर्नेछौं। सबै चीज चमकदार हुनु पर्छ, अन्तिम विवरण तल, बाथरूम, सजावटी तत्वहरु कि छोडिएको छ र मुख्य कोठा मा जोड।
क्रमबद्ध र स्पष्ट हामी उनीहरु संग जोडिन्छौं यद्यपि उनीहरु प्रविधि हुन् कि अलग गर्न सकिन्छ। एक हात मा, सबै कुरा राम्रो संगठित र तपाइँको साइट मा हरेक विवरण हुनुपर्छ। के काम गर्दैन, हामीले यसलाई फ्याँक्नु पर्छ, किनकि कम धेरै छ। यो संकेत गर्दछ कि आयाम एक महत्वपूर्ण आधार हो जब किन्नु र यसैले कि रिक्त स्थान बरु स्पष्ट हुनु पर्छ ताकि यो अधिक ब्याज प्रदान गर्दछ।
सटीक मर्मत गर्नुहोस्: न त यो पैसा को एक ठूलो रकम को लगानी मिलेर बनेको छ, तर त्यो मात्र घर आफैंले हामीलाई बताउनेछ। किनभने कहिले काहिँ यो प्लग वा स्विच परिवर्तन संग काम गर्दछ, प्लम्बिंग को अतिरिक्त वा रंग को एक कोट लागू गर्न को लागी यदि आवश्यक छ। तर यदि त्यहाँ प्रमुख समस्याहरु छन्, ती बेच्न को लागी कदम उठाउनु भन्दा पहिले निश्चित हुनु पर्छ।
कस्टम विवरण हटाउने प्रयास गर्नुहोस्: हामी एक तटस्थ ठाउँ चाहन्छौं जस्तै कि हामीले टिप्पणी गरेका छौं। त्यसोभए, परिवार को विवरण छ कि यो मा रह्यो बेकार छ। व्यक्तिगत वस्तुहरु लाई पुरा तरिकाले हटाउनु पर्छ।
प्राकृतिक प्रकाश संग आफैलाई मद्दत गर्नुहोस्: भारी पर्दा वा अन्धा हटाउने प्रयास गर्नुहोस्। विन्डो तिर मुख्य फर्नीचर ल्याउनुहोस् यो मा अधिक प्रकाश को एक ठाउँ सिर्जना गर्न। याद गर्नुहोस् कि तपाइँ सधैं आफैंलाई दर्पण वा बत्तीहरु संग रणनीतिक रूप मा कुनाहरु मा राखीयो जब प्राकृतिक प्रकाशले उनीहरुलाई पहुँच गर्दैन मद्दत गर्न सक्छ।
समाप्त गर्न यो तटस्थ रंग मा शर्त गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो छ, आधारभूत सेतो र धेरै हल्का टोन। यो सँधै सन्तुलन को भावना दिनु पर्छ।
किन यो प्रविधि एक राम्रो विचार बन्यो
पहिलो किनभने यो एक महान परिणाम दिन्छ जब यो बिक्री को बारे मा कुरा गर्न को लागी आउँछ। कारण त्यो हो जब भावी क्रेताहरु एक घर भाडामा लिने को रूप मा सजाने को लागी सजीलो ठाउँ मा जान्छन्, उनीहरु त्यो घरमा आफ्नो सपनाहरु को भावना प्राप्त गर्न असमर्थ छन्। तेसैले, जब हामी यसलाई एक तटस्थ तरीका मा सेवा गर्छौं, यसको स्वाद, सपनाहरु र अपेक्षाहरु फस्टाउन थाल्छन्। यस्तो लाग्छ कि दिमागले सबै चीज प्रदर्शन गर्दछ। कती राम्रो संग हामीलाई थाहा छ कि कल्पना शक्तिशाली छ र सजावट मा अझ धेरै!
लेखको पूर्ण मार्ग: मुख्य पृष्ठ » सजावट » सजाउनुहोस् » के तपाइँ घर स्टेजिंग जान्नुहुन्छ? यसलाई प्राप्त गर्न अचम्मको प्रविधि
टाईलमा चुनाको दाग हटाउने घरेलु उपचार
१० शरद basतु आधारभूत कि तपाइँ तपाइँको घर मा याद गर्न सक्नुहुन्न